नेदरल्याण्डसँग खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा, को- को परे टोलीमा?
२०७३ श्रावण १९ बुधबार, काठमाडौं। आगामी साउन २९ र ३१ गते नेपलले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेदरल्याण्डसँग प्रतिस्पर्दा गर्दैछ। र उक्त खेलको लागि नेपाली टोलीको अन्तिम टुङ्गो लागेको छ। पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको टोलीमा सुनिल धमलाको पुनरागमन हुँदा सुवाक खकुरेल भने टोलीबाट बाहिरेका छन्। टोलीमा पर्ने अन्य सदस्यहरूमा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी, सागर पुन र विनोद भण्डारी छन् । यसैगरि राजु रि ... बाँकी अंश»
रियो ओलम्पिकको उद्घाटन शुक्रबार, फुटबलका खेल बुधबारदेखि नै
२०७३ श्रावण १९ बुधबार, माकाराना रंगशाला । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा ओलम्पिक खेलकुदको ३१ औं संस्करण सुरु हुँदैछ । तर रियो ओलम्पिकअन्तर्गत फुटबलका खेलहरु भने बुधबारबाटै सुरु हुँदैछन् । पहिलो दिन फुटबलको महिला ईभेन्टमा स्वीडेन र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै छन् । यो खेल राति पौने १० बजेदेखि सुरु हुनेछ । त्यस्तै राति पौने १ बजे ब्राजिल र चीन भिड्ने कार्यतालिका छ । पुरुषतर्फका खेल भने बिहीबारबाट हुने छन् । पुरुषको पहिलो खेलमा र्इराक र डेनमार्कबीच भिडन्त हुनेछ ... बाँकी अंश»
भारतबाट वेष्ट इन्डिजलाई बचाउने एकमात्र विकल्प वर्षा
२०७३ श्रावण १९ बुधबार, किङ्सटन । भारतबाट वेष्ट इन्डिजलाई बचाउने अब कोही छ भने त्यो वर्षामात्रै हो । किङ्सटनमा जारी दोस्रो टेष्ट क्रिकेटमा भारत चौथो दिनमै विजयी हुने थियो । वर्षाले गर्दा १५.५ ओभरमात्र सम्भव भएको खेलमा वेष्टइन्डिजले ४८ रन बनाउँदा ४ विकेट गुमाइसकेको छ । अब पाँचौं दिन भारतलाई ६ विकेट झार्नुछ । मोहम्मद सामीले २ तथा इशान्त शर्मा र अमित मिश्राले १–१ विकेट लिएका छन् । भारतले तेस्रो दिनको समाप्तिसम्म तीन सय चार रनको अग्रता लिएर इनिङ ... बाँकी अंश»
कराते टोली कोलकाता गयो
२०७३ श्रावण १८ मंगलबार, काठमाडौं । दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिमा सहभागी हुन २१ खेलाडीसहित ३४ सदस्यीय नेपाली कराँते टोली मंगलबार भारतको कोलकाता प्रस्थान गरेको छ । खेलाडीहरुमा पर्शुराम बाँस्तोला, सरिता श्रेष्ठ, लक्ष्मी भट्ट, विष्णु श्रेष्ठ, गणेश पाइजा, वीरबहादुर रनेनी, दीपा लामा, मनीषा थारु, भीमबहादुर तामाङ, एलिसा तामाङ, डिगम्बरप्रसाद पन्त, एलिसा लामा, सुशान्त हुमागाईं, दिवाकर लामा, पुनम पौडेल, कुसुम पौडेल, रोजिता ढुंगेल, मन्दिरा थापा मगर, सुस्मिता वाइबा, ... बाँकी अंश»
फुटबल महारथी पेलेको गित रियो ओलम्पिक २०१६ मा बज्ने
२०७३ श्रावण १८ मंगलबार, फुटबल महारथी पेलेले रियो ओलम्पिक २०१६ का लागि भनेर विशेष गित रेकर्ड गराएका छन्। पेलेको उक्त गित आसन्न रियो ओलम्पिक २०१६ मा बजाइने छ। पेलेको उक्त गितको शिर्षक छ “इस्पेराका” जसको अर्थ हो “आशा”। ७५ वर्षिय पेलेले रियो ओलम्पिक २०१६ का लागि आफुले गित रेकर्ड गरेको कुरा आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्। पेलेले संसारभरि खेलले जगाएको आशा र खुसीको सोचले आफु प्रेरित भएको कुरा जनाएका छन्। पेलेले आफ्नो टुइटर पेजमा भिड ... बाँकी अंश»
ओलम्पिक खेलाडीको अनौंठो हर्कत, ५ युवतीले गरे नङ्न फोटोसुट
२०७३ श्रावण १८ मंगलबार, काठमाडौं। कहिलेकाहीँ खेलाडीहरू चर्चा बटुल्नका लागि अनौंठो हर्कतहरू देखाउने गर्दछन्। यस्तै भएको छ रियो ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा रियो ओलम्पिक नजिँकिदै गर्दा इङ्ल्याण्डका ५ जना महिला रग्बी खेलाडीहरूले आफ्नो नङ्न शरिरको फोटोसुट गराएका छन्। नङ्न फोटोसुट गराउने पाँच खेलाडीहरुमा क्लियर अलान, डेनीली वाटरम्यान, माइकेला स्टानिफोर्ड, एमी विल्सन हार्डी र हेथर फिसर रहेका छन् । उनीहरूले ग्लोसी म्यागेजिनका लागि उक्त फोटोसुट गराएको बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण १८ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाली पौडीबाजले अहिलेसम्म दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पनि राम्रो प्रभाव जमाउन सकेका छैनन् । त्यस्तोमा १३ वर्षे गौरिका सिंहले गत फागुनमा चमत्कार गरिन् । भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा भारतमा गौरिकाले एक रजत र तीन कास्यपदक जितेर कीर्तिमान रचिन् । नेपाली पौडीको इतिहासमा यी फुच्चीको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । यो फुच्ची जलपरीले नेपालमामात्र होइन विश्वमै कीर्तिमान रच्ने सम्भावना बढेको छ । त्यो पनि ओलम्पिक खेलकुदमा । ... बाँकी अंश»
रियो ओलम्पिक खेल्ने १० हजारमा गौरिका सबैभन्दा कान्छी
२०७३ श्रावण १८ मंगलबार, काठमाडौं । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आगामी शुक्रबारबाट हुने रियो ओलम्पिकमा सहभागि हुनेमा नेपाली पौडीबाज गौरिका सिंह सबै भन्दा कान्छि खेलाडी हुने भएकी छन् । रियो ओलम्पिकको आधिकारिक वेवसाइटले रियोमा सहभागि हुने १० हजार खेलाडी मध्ये गौरिका कम उमेरमै ओलम्पिक खेल्ने खेलाडी भएको उल्लेख गरेको छ । विश्व पौडीसंघ फिनाले गौरिकाले गरेको प्रदर्शनका आधारमा रियो ओलम्पिकका लागि छनोट गरेको हो । गौरिकाले १ सय मिटर व्याकस्ट्रोक र फ्रिस्टालमा प् ... बाँकी अंश»
भारतसामु वेष्ट इन्डिज निरीह, दोस्रो टेष्ट भारतको पक्षमा
२०७३ श्रावण १८ मंगलबार, किङ्सटन । वेष्ट इन्डिजविरुद्धको दोस्रो टेष्ट क्रिकेटमा पनि भारत हावी देखिएको छ । भारतले तेस्रो दिनको समाप्तिसम्म तीन सय चार रनको अग्रता लिएर इनिङ समाप्तिको घोषणा गरेको छ । भारतले ९ विकेटको क्षतिमा ५०० रन बनाएर इनिङ समाप्ति गरेको हो । ओपनिङ ब्याट्सम्यान लोकेश राहुलले १५८ तथा अजिन्क्या रहानेले अविजित १०८ रन बनाए । यसअघि वेष्ट इन्डिजले पहिलो इनिङमा १९६ रनमात्र बनायो । जर्माइन ब्ल्याकउडले ६२ रन जोडेको इनिङलाई सस्तैमा पूर्णविराम ल ... बाँकी अंश»
रोजर्स कपसहित जोकोभिचलाई यस वर्ष ७ उपाधि
२०७३ श्रावण १७ सोमबार, एजेन्सी । शीर्ष वरियताका सर्वियन टेनिश खेलाडी नोभाक जोकोभिचले चौथो पटक रोजर्स कपको उपाधि जितेका छन् । जोकोभिचले छटौं वरियताका जाप्नीज् खेलाडी केई निसिकोरीलाई ६–३, ७–५ को सोझे सेटमा हराउँदै यस वर्ष लगातार सातौं उपाधि जितेका हुन् । २९ वर्षीय जोकोभिच यसअघि भएको विम्बिल्डन टेनिसको तेस्रो राउण्डमा साम केरीसंग हारेका थिए । अब उनले ब्राजिलमा हुने रियो ओलम्पिकमा सर्वियाको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । उनले पुरुष सिंगल्स र डबल्स दुवैमा सहमागिता ज ... बाँकी अंश»
पाउल पोग्बाको अनुबन्ध ओल्ड ट्राफोड इतिहासकै महंगो हुन सक्ने
२०७३ श्रावण १७ सोमबार, काठमाडौं । इङ्लिश प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन नजिकिँदै गर्दा अहिले क्लबहरु खेलाडी किनबेचमा व्यस्त छन् । नयाँ सिजन सुरुवातको पूर्व सन्ध्यामा यतिवेला युभेन्टस मिडफिल्डर पाउल पोग्बाको नयाँ अनुबन्धको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । पोग्बालाई अनुबन्ध गराउन म्यानचेस्टर युनाइटेडले थालेको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । म्यान्चेस्टर युनाइटेडले पोग्बालाई अनुबन्ध गर्न १ सय मिलियन बढी युरो खर्च गर्ने देखिएको छ । पोग्बाको यो अनुबन्ध नयाँ सिजनको ल ... बाँकी अंश»
के हुँदैछ रियो ओलम्पिक २०१६ को पूर्वसन्ध्यामा ?
२०७३ श्रावण १७ सोमबार, रियो। खेलाडीहरुको अपूर्ण समायोजन लगायतका विभिन्न समस्याका बाबजूत रियो ओलम्पिक २०१६ सुरू हुँदैछ। तर, रियो ओलम्पिक सुरू हुन छ दिन बाँकी रहँदा डेली मेलसँग कुरा गर्दै एक स्थानीयले रियो ओलम्पिकमा आउने पाहुँनाहरुले न्यानो स्वागतको अपेक्षा राख्न सक्छन् र त्यो सबै तयारी रहने जनाएका छन्। आसन्न रियो ओलम्पिक यहीँ अगष्ट ५ देखि सुरू हुँदैछ। योसँगै रियोमा ओलम्पिकको रौनक सुरू भइसकेको छ। ओलम्पिकसँगै बाह्य पाउँनाहरुलाई स्वागत गर्न रियोबासी उत्साहित द ... बाँकी अंश»
प्रिमियर लिग बिजेता लेस्टर पराजित, लिभरपुल र बायर्न बिजयी
२०७३ श्रावण १६ आइतबार, काठमाडौं। अन्तराष्ट्रिय च्याम्पियन्स कप फुटबलमा गत सिजनको इङ्लिस प्रिमियर लिग विजेता लेस्टर सिटीलाई नमिठो झट्का लागेको छ। लस ऐन्जलमा भएको खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मनसँग लेस्टर सिटीले ४-० को पराजय बेहोरेको छ। पिएसजीका लागि एडिसन क्याभानीले पेनाल्टी मार्फत खेलको २६ औं मिनेटमा गोल गर्दै टीमलाई सुरूवाती अग्रता दिलाएका हुन्। पहिलो हाफको अन्त्यतिर नानिटामो जोनाथन आइकोनले गोल गर्दै टीमको अग्रता दोब्बर बनाए। यसैगरी टीमका लागि लुकास मोराले ... बाँकी अंश»
‘देशको इज्जत मेरो हातमा आएको छ’ –फुपुल्हामु खत्री
२०७३ श्रावण १६ आइतबार, काठमाडौं । सामान्य परिवारमा जन्मेकी जुडो खेलाडी फुपुल्हामु खत्रीले सायदै सोचेकी थिइन् कि उनी पनि यस्तो प्रख्यात खेलाडी होलिन् र ओलम्पिकमा पुग्लिन् । तर भाग्यभन्दा बढी मेहनतले नै उनलाई ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोबाट निम्तो आएको छ । अर्थात् उनी साउन २१ गतेदेखि हुँदै गरेको ३१ औं रियो ओलम्पिकमा सहभागी हुँदैछिन् । अझ त्यसमा पनि नेपाली टिमको नेतृत्व गर्दै झण्डा बोक्न पाएसंगै उनमा खुसीको सीमा छैन । हाम्राकुरासंगको कुराकानीमा उनले भनिन् –‘मसंग ... बाँकी अंश»
च्याम्पियन्स कपमा बार्सिलोना र रियल मड्रिड विजयी
२०७३ श्रावण १६ आइतबार, डब्लिन । नर्थ अमेरिका च्याम्पियन्स कप फुटबलमा स्पेनिश क्लवहरु बार्सिलोना र रियल मड्रिडले शानदार जित हासिल गरेका छन् । बार्सिलोनाले सेल्टिकलाई ३–१ ले हरायो । डब्लिनमा भएको खेलमा बार्सिलोनालाई जिताउने क्रममा मध्यान्तरअघि नै आर्दा तुरान र हाड्डाडीले एक एक गोल गरे भने एक गोल उपहार स्वरुप पाएको थियो । त्यस्तै रियलले इङ्लिश क्लव चेल्सीलाई ३–२ ले हरायो । रियलका लागि मार्सेलोले २ तथा मारियानो मेजियाले १ गोल गरे । चेल्सीका लागि दुवै गो ... बाँकी अंश»
म्यानचेष्टर युनाइटेड निखारिंदै, गालातासारेमाथि ५–२ को जित
२०७३ श्रावण १६ आइतबार, काठमाडौं । इङ्लिश क्लव म्यानचेष्टर युनाइटेड निखादिंदै गएको प्रमाण पेश गरिरहेको छ । प्रिमियर लिग सुरु हुन दुई हप्ता बाँकी रहेका बेला म्यानचेष्टर युनाइटेडले मैत्रिपूर्ण खेलमा लगातार सफलता हासिल गरेको छ । पछिल्लो टर्किस क्लव गालातासारेविरुद्धको खेल युनाइटेडले ५–२ ले हरायो । वाइने रुनीले दुई तथा ज्लाटान इब्राहिमोभिच, फेलानी र हुँवा माटाले एक एक गोल गरे । गालातासारेका लागि गुमुज र बु्रमाले एक एक गोल गरे । यो खेलपछि ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण १५ शनिबार, काठमाडौँ । भारतमा हुने ५औँ दक्षिण एसियाली आमन्त्रण आइटिएफ तेक्वान्दो च्याम्पियनसिमा सहभागी हुन जाने नेपाली टोलीको बिदाई भएको छ । बैग्ंलोरमा हुने प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने १० खेलाडी, दुई प्रशिक्षक, एक रेफ्री तथा टिम ब्यवस्थापकलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)का उपाध्यक्ष एवम् नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव लामा टेण्डिले विदाई गरे । आगामी ५ देखि ७ अगस्टसम्म हुने च्याम्पियनसिपमा खेलाडीहरु योगेश छन्त्याल मनोज खड्का, आशिष कार्की, सूर ... बाँकी अंश»
आर्सनल ल्याकेजेटलाई ३५ मिलियन युरो तिर्न तयार
२०७३ श्रावण १५ शनिबार, एजेन्सी । इङ्गलिश क्लब आर्सनल फ्रेन्च क्लब लियोंका स्ट्राइकर एलेक्सजेन्डर ल्याकेजेटलाई ३५ मिलियन युरो खर्च गरी भित्र्याउन तयार भएको छ । लेष्टर सिटीका जेमी भार्डीलाई क्लबमा भित्र्याउन नसकेपछि आर्सनल ल्याकेजेटलाई भित्र्याउन ३५ युरो खर्च गर्न तयार भएको हो । सो प्रारम्भिक प्रस्ताव लायन्सले स्वीकार गरिसकेको छैन । यद्यपि, लियोंका टिम म्यानेजर जोन माइकल अलासले आर्सनल आफ्नो पहिलेकै प्रस्तावमा नफर्किने जिकिर गर्दै आफुहरु आर्सनलक ... बाँकी अंश»
२०७३ श्रावण १४ शुक्रबार, तेह्रथुम। सदरमुकाम म्याङलुङ्गमा यसवर्ष पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर जिल्लामा हालसम्मकै सर्वाधिक धनराशीको खुला पुरुष फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको छ। खेलकुदमा विकाससँगै युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने उदेश्यले स्थापित सामुदायिक चेतना अभिवृद्धि तथा बातावरण मैत्री राष्ट्रिय विकास संस्था (युक्यानडु) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो वर्ष पनि प्रतियोगिता सन्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। सदरमुकाम म्याङ्गलुङस्थित टुँडिखेलमा श्रीकृ ... बाँकी अंश»
भारतमा नेपाली कराते खेलाडीको सफलता : १९ स्वर्ण, १२ रजत, ८ कास्य
२०७३ श्रावण १३ बिहिबार, काठमाडौं । भारतीय मार्सलआर्ट सस्थांनले जयपुरमा आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय कराते नेपाली टोली १९ स्वर्ण १२ रजत ८ कांस्य करी कुल ३९ पदक सहित दोस्रो भएको छ । प्रतियोगितामा आयोजक राष्ट्र भारत ३१ स्वर्णसहित पहिलो भयो । भुटानले २ स्वर्ण , २ रजत र १ कांस्य पदक हात पार्दै तेश्रोमा खुम्चियो । प्रतियोगितामा नेपाल लगायत भारत ,श्रीलंका ,बंगलादेश ,अफगानिस्तान र भुटान गरी ६ देश का ९०० जना खेलाडी सहभागि थिए । प्रतियोगितामा नेपालबाट ४३ जना खेलाडी स ... बाँकी अंश»